မာရဇ္ဇ | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (ကျား) / မာရဇ္ဇ
Category Archives: မာရဇ္ဇ
မာရဇ္ဇ – လျှော့မတွက်ပါနဲ့ [SINGLE]
February 11, 2015 mmsong အဆိုတော် (ကျား) မာရဇ္ဇ Media Myanmar Artist New Myanmar Albums
မာရဇ္ဇ – အသစ်ကပြန်စမယ် (2013) [Single]
[Released: Dec 09, 2013. Genre: Rock. Quailty: M4A & 320kbps MP3] 01. မာရဇ္ဇ – အသစ်ကပြန်စမယ်.mp3 – 10 MB 01. မာရဇ္ဇ – အသစ်ကပြန်စမယ်.m4a – 8 MB မာရဇ္ဇ – အသစ်ကပြန်စမယ်.pdf (Lyrics) – 240 KB [Download All Songs + pdf – 18 MB]
December 28, 2013 MMA အဆိုတော် (ကျား) မာရဇ္ဇ Myanmar Artist New Myanmar Albums Leaveacomment
မာရဇ္ဇ ၊ မင်းယု ၊ လုလု – အစဉ်အလာဖျက်ခြင်း
မာရဇ္ဖ ၊ မင်းယု ၊ လုလု – အစဉ်အလာဖျက်ခြင်း ၀၁။ မာရဇ္ဖ-မရှိခိုးနိုး ၀၂။ လုလု-နွေရက်များ ၀၃။ မင်းယု-ရင်ဆိုင်လိုက် ၀၄။ မာရဇ္ဖ-ဂျစ်ပဆီ ၀၅။ လုလု-အစဉ်အလာဖျက်ခြင်း ၀၆။ မင်းယု-နွံ ၀၇။ မာရဇ္ဖ-ဖြေသိမ့်ခြင်း ၀၈။ လုလု-လွမ်းနေဆဲ ၀၉။ မင်းယု-မိုက်မဲသူ ၁၀။ မာရဇ္ဖ-နားလည်ပေးပါ ၁၁။ လုလု-သက်မဲ့ပန်းချီကား ၁၂။ မင်းယု-မင်းရက်စက်တော့ ၁၃။ Bonus Track မာရဇ္ဖ-လာခေါ်မယ် Click credit to axeltkw.blogspot.com
June 2, 2011 swordfish လုလု မာရဇ္ဇ New Myanmar Albums Leaveacomment
ချစ်သူအလှဖွဲ့ – MYMC Playlist
ချစ်သူရဲ့အလှကို ညွှန်းဖွဲ့ထားတဲ့ ချစ်သူအလှဖွဲ့ သီချင်းလေးတွေကို စုပြီးလုပ်ထားတဲ့ Playlist လေးပါ။ ၁. သူတစ်ခါပြုံးလိုက်တိုင်း – A Na ၂. သနပ်ခါး – Blackhole ၃. လှပါတယ် လှပြီးသား – D ဖြိုး ၄. ချစ်စရာလေးပါ – လှိုင်ဦးမော် ၅. မင်းလေးနားလည် – ထူးအယ်လ်လင်း ၆. မျက်နှာ – IMP ၇. နှင်းဆီဝင်္ကာပါ – လေးဖြူ ၈. ချစ်သူအလှ – လင်းနစ် ၉. အချစ်မျက်ဝန်း – L လွန်းဝါ ၁၀. ဆွဲအား – မာရဇ္ဇ ၁၁. မေ – မင်းမော်ကွန်း ၁၂. မြန်မာမလေး – ပြည်စိုး ၁၃. မျက်ဝန်းလေး – ဖြိုးကြီး … Continue Reading →
January 24, 2011 amedeo ဖြိုးကြီး စိုင်းစိုင်း ထုးအယ်လင်း လေးဖြူ လှိုင်ဦးမော် လင်းနစ် မင်းမော်ကွန်း မာရဇ္ဇ Black Hole D ဖြိုး IMP Lလွန်းဝါ Rဇာနည်3Comments
Marriza’s songs -#- Compilation
It is justacompilation of his songs. :Downlaod
January 14, 2011 mars အဆိုတော် (ကျား) မာရဇ္ဇ Myanmar Artist2Comments
၀၁။ အဆိပ်သင့်ရော့အမ်ရိုး ၀၂။ အဆိုးည ၀၃။ အသည်းကွဲတေး ၀၄။ ဘယ်တော့မှမဝေးဘူး ၀၅။ တစပြင် ၀၆။ မျှော်လင့်ချက်ဝေး ၀၇။ ကဝေရှင် ၀၈။ မမုန်းနဲ့၀၉။ နာကျည်းလိပ်ပြာ ၁၀။ ရွှေရောင်ကောင်းကင် ၁၁။ ဆုံးရှုံးရတော့မလား ၁၂။ သံသယခရီးသည် ၁၃။ သိပ်ချစ်နေလို့၁၄။ ရည်းစားဦးအတွက်သီချင်း
November 7, 2010 Yee Wai Aung အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) မာရဇ္ဇ 1 Comment
ဂန္တ၀င်သုံးဖေါ်-Live Show(3)
၀၁။ အကြင်နာဆုံးမို့ပြောချင်တယ် (ကိုလင်း) ၀၂။ အလွမ်းဗိမ္မာန်(ရာဇာဝင်းတင့်) ၀၃။ အစိုးမရတဲ့ဘ၀(ရွှေရည်သိန်းတန်) ၀၄။ ချစ်ငွေသောင်ယံ(ဗညားဟန်) ၀၅။ ဓနမဲ့အချစ်ရဲ့လျှောက်ထားချက်(မာရဇ္ဖ) ၀၆။ ဟွန်ဒါဆိုင်ကယ်(စုထက်မင်းအောင်နှင့်အဖွဲ့) ၀၇။ ကိုကိုများခေတ်(မို့မို့ဇော်ဝင်း+ဆူးဆူးဇော်ဝင်း) ၀၈။ မဟောင်းသေးပါဘူးအချစ်ရယ်(ကိုင်ဇာ) ၀၉။ မမပုံပြင်(ပြည်မိုး) ၁၀။ မုသားမဲ့သစ္စာ(ဗလ) ၁၁။ သစ္စာရှင်(မေခလာ)
October 17, 2010 Yee Wai Aung ဗလ ဗညားဟန် အခွေ (အများ) ရာဇာဝင်းတင့် မေခလာ ကိုင်ဇာ မို့မို့ဇော်ဝင်း မာရဇ္ဇ Leaveacomment
ရုံးတော်ကအပြန် ဘိုဘို အသည်းကတောင်းဆိုတယ် အဲလက်စ် ရင်ထဲကမွှေး ဂရေဟမ် ဖွင့်ပြောဖို့အချိန်နှောင်း ကိုင်ဇာ ဟန်းနီးမွန်းခရီး၂ ကဗျာဘွဲ့မှူး ဂစ်တာလူလေး မာရဇ္ဇ အိပ်ရာဝင်သီချင်း ညီပုလေး အိမ်ကဆင်းသွားတဲ့ချစ်သူ ထွဏ်းထွဏ်း မကြားရတာကြာပြီ ကဗျာဘွဲ့မှူး အဖေ ဘိုဖြူ အလွမ်းသီချင်းရှင် အောင်ရင် ပိုင်ရှင်ပြန်လာရင် ရင်ဂို အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ –
September 2, 2010 ချစ်သားငယ်လေး အဲလက်စ် ထွဏ်းထွဏ်း ဂရေဟမ် ရင်ဂို အောင်ရင် ကိုင်ဇာ ကဗျာဘွဲ့မှုး ညီပုလေး မာရဇ္ဇ 13 Comments
မာရဇ္ဇ – ကိုရုပ်ဆိုး
၀၁။ အမှားများ ၀၂။ ဂီတာလူလေး ၀၃။ ချစ်သွားပြီ ကလေးရယ် ၀၄။ အဆက်ကလေးတွေဖြတ် ၀၅။ ပကာသနာဇာတ်ပြတ်သမား ၀၆။ ကိုရုပ်ဆိုး ၀၇။ အိမ်အိုဟောင်း ၀၈။ မိန်းကလေးတွေသတိပြု ၀၉။ တစ်ချစ်ထဲအသည်း ၁၀။ ယောင်္ကျားမျက်ရည် ၁၁။ အငိုဂီတာ ၁၂။ ကိုရုပ်ဆိုး
March 9, 2010 ME *MMA* အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) မာရဇ္ဇ5Comments
၁။ ရည်စားဦးဇာတ်လမ်း – Rဇာနည်+မီးမီးခဲ ၂။ ပထမဆုံးအသည်းကွဲဇာတ်လမ်း(ရည်စားဦးအတွက်) – သျှီ ၃။ ရည်းစားလေး – ချစ်ကောင်း ၄။ ရည်းစားသိပ်ရှားလား – လေးလေးဝါး ၅။ ရည်းစားဦးတို့ရင်ခုန်ည – ဘိုဘို+လေးလေးဝါး ၆။ ရည်စားဦး – ချောစုခင် ၇။ ရည်းစားလည်းမထားဘူးတော့ – ရင်ဂို ၈။ ဘယ်ရည်စားကိုအချစ်ဆုံးလဲ – ရတနာဦး ၉။ ရည်စားအဖြစ်မှစွန့်လွှတ်လိုက်သည် – မာရဇ္ဖ ၁၀။ ရည်စားထားရကောင်းမလား – မီးမီးခဲ
February 13, 2010 mmsong ဘိုဘို အခွေ (အများ) ရင်ဂို ရတနာဦး ချောစုခင် လေးလေးဝါး ချစ်ကောင်း မီးမီးခဲ မာရဇ္ဇ သျှီ Rဇာနည် Valentine Albums 11 Comments
၁။ ခိုင်မြဲသောစ္စာ – နွဲ့ယဉ်ဝင်း ၂။ အစွန်းရောက်ချစ်သူများ – ကောင်းဆက်+နွဲယဉ်ဝင်း ၃။ ဝေးများဝေးရင် – ကောင်းဆက်+လေးလေးဝါး ၄။ ဘယ်လောက်ထိချစ်လဲ – ထွဏ်းထွဏ်း+ချောစုခင် ၅။ မုန်းမေ့ဖို့မလွယ် – မာရဇ္ဇ+လေးလေးဝါး ၆။ မက်ခွင့် – ထွဏ်းထွဏ်း+ချောစုခင် ၇။ ရူး – ကောင်းဆက် ၈။ ပြောင်းလည်းမှုမရှိ – အဲလက်စ်+ကော်နီ ၉။ နားလည်ပေးပါ(ဒါဟာအချစ်) – မာရဇ္ဇ+လေးလေးဝါး ၁၀။ အချစ်မဲ့ ညရင်ခွင် – အဲလက်စ်+မီမီဝင်းဖေ
February 13, 2010 mmsong နွဲ့ယဉ်ဝင်း အခွေ (အများ) အဲလက်စ် ထွဏ်းထွဏ်း ကောင်းဆက် ကော်နီ ချောစုခင် လေးလေးဝါး မီမီဝင်းဖေ မာရဇ္ဇ Valentine Albums7Comments
၀၁။ လူကြမ်းလေး ၀၂။ ချစ်ခြင်းရဲ့ လျှို့ ဝှက်ချက် ၀၃။ လောက (အချစ်ရှာသူ) ၀၄။ သတိရသီချင်း ၀၅။ ဆိုပါတော့ ၀၆။ တိမ်တိုက်နတ်သမီး ၀၇။ အချစ်ငတ်တယ် ၀၈။ တေးမြုံငှက် ၀၉။ ချစ်သူတို့ ရဲ့ အလင်္ကာ ၁၀။ အသက်ရှင်ခွင့်
February 13, 2010 mmsong အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (အများ) အဲလက်စ် ထူးအိမ်သင် ထွဏ်းထွဏ်း ကောင်းဆက် မာရဇ္ဇ Valentine Albums2Comments